यसरी गर्नुहोस् डिप्रेसन र यसको उपचार
अगस्ट 29, 2018 अगस्ट 29, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा
दिनभरमा हामी कुनै न कुनै कुराले चिन्तित हुन्छौं । करियरको कुराले, पैसाको कुराले, विफलताको कुराले, साथीभाईको कुराले, शारीरिक रोगको कुराले, छोराछोरीको कुराले, परिवारको कुराले डिप्रेसन हुनसक्छ ।
मानविय जीवनमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । हामी चेतनशिल छौं, चिन्ता हुन्छ नै । तर, जब चिन्तालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं, त्यसले हामीलाई मानसिक रोगी बनाउँछ । किनभने चिन्ता एक किसिमको मानसिक विकार हो ।
भविष्यको चिन्ता नलिने
‘भोलि के होला ?’ भन्ने सोचले चिन्तालाई बढावा दिन्छ । त्यसैले सँधै आजको लागि बाँचौं किनकी वर्तमान नै वास्तविकता हो, र वर्तमानमा राम्रो गर्ने कोशिष गरौं । यसो गर्दा भविष्य आफसेआफ ठीक हुन्छ । हाम्रो हरेक दिन र हरेक पलले हामीलाई केही न केही नयाँ कुरा सिकाउँछ र समस्यासँग लड्न सिकाउँछ ।
Avena Sativa Q यो औषधि मानसिक रोगको उपचार मा राम्रो फाइदा गर्दछ । एलोपैथिकमा डिप्रेसन हटाउन प्राय निन्द्रा लगाउने लट्ठ पार्ने खालको औषधि खुवाउने चलन छ । यो औषधि ले भने कुनै साइडइफेक्ट नगरी आराम दिन्छ ।
मात्रा:१०/१५ थोपा थोरै पानीमा मिलाएर दिन्मा २ पटक र सुत्नुभन्दा अघि दिनाले राम्रो निन्द्रा लगाउद छ ।
मानिसले किन आत्महत्या गर्छन् ?
← जोर्नी दुख्ने रोग र उपचार
घाउ खटिरा र उपचार →
सेप्टेम्बर 15, 2019 सेप्टेम्बर 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
भुट्की च्याउ र यसका फाइदाहरु
जुलाई 10, 2019 जुलाई 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
One thought on “डिप्रेसन र यसको उपचार”
Pingback:होम्योपैथीक औषधि र मानसिक रोग